Abazali abaningi babuza lo mbuzo. Ngakolunye uhlangothi, ukuya ukugubha ngokwayo, ngaphandle kokuthatha ingane - akubona ubulungisa, ikakhulukazi uma kuziwa amaholide umndeni. Ukuphumula, umntwana unesizungu ekhaya - bese kukhona umuzwa wecala. Ngakolunye uhlangothi, izinyane emkhosini - kuba eziningi izinkinga ungavumeli abadala ukuze uphumule. Yebo, futhi le ndoda kancane uyakhathala ngokushesha. Ngakho thatha umntwana noma cha?
Okokuqala sidinga ukwazi ngayiphi indlela kuyoba umcimbi. Kungenye into uma lalihlelekile ngokwakha, kuhlukile uma - iIgama. Ngisho hot izinsuku ehlobo kusihlwa ekubeni ezipholile, futhi ngaleyo ndlela kusukela ukuphumula, ihlelwe endaweni evulekile, kuzodingeka: kuphakathi kokuthi izingane zihambe ekhaya noma ngenxa impilo yabo kufanele ushiye ngemuva nje kancane esibandayo (lena uma kuziwa ehlobo, ekwindla kanye entwasahlobo isimiso, ingane akuyona efiselekayo lokufeza emgwaqeni ezingaphezu kuka 3-4 amahora, ngisho noma ngokufudumele abagqoke.
Kubalulekile futhi kakhulu cabanga yobudala encane. Uma engalilaleli ngisho niyakwazi ukuxoxa futhi usanda kulithola ukuhamba - kube alungele yokuthi ngaso sonke isikhathi kufanele uyigcine kwi isandla. izingane esezikhulakhulile ngenkuthalo ukuxhumana nontanga yabo, uyozizwa ngisho umuntu omdala Sabantui ngcono kakhulu, ikakhulukazi badla lapho kuyoba nezinye izingane. Kodwa ungakhohlwa: cishe kunoma iyiphi ingane zasenkulisa ufuna ukulala amahora 22-23.
Eminyakeni yamuva zithandwa kakhulu ukumema ukuba izoso ngemvelo umndeni, kodwa ngesikhathi esifanayo iphuzu ukubala: abantwana bakwa izivakashi uhlale ekhaya. Ukuziphindiselela yilo noma kunjalo bengayi, ngoba Bebik imishado ukuletha asemrarweni, abazali babo hhayi kuphela, kodwa futhi umhleli womcimbi. Icala ezindabeni eziningana. Okokuqala, ekutheni ingane ukwenza umyalelo in yokudlela, futhi lokhu, ezimweni eziningi, imali eningi. Ukwazi ukuthi ingane namanje lutho ikakhulukazi kuyoba khona - kuvela, imali aphonswe umoya. Futhi razveselennye abazali, udakiwe ikakhulukazi, ngokuphelele inikezwe yokuzijabulisa futhi ngisebenza, wamshaya izingane zabo. Futhi izingane ngesikhathi njengenhlangano rush okungavamile eliqatjhiweko athukuthele futhi aklabalase bangase balwe ngisho. Ngenxa yalokho, ngokuvamile kufanele athobe umakoti wabo ecasukile.
Uma uhlupha unembeza, uma uya wedwa, kokushiya ingane ekhaya? Nquma ngokwakho, kodwa khumbula: iningi amaholide zezingane musa kuhlale ezingaphezu kuka 3-4 amahora, ngoba uhlale isikhathi eside ingane akakwazi - kuba yisicefe futhi ungakujabulisi.
Nezimfumbe Marshak: lokusungula - izingane!